Jamaahiirta Manchester United Oo Ole Gunnar Solskjaer Ka Dalbaday Hal Arrin Ka Hor Ciyaarta PSG – Latest Sports News
Jamaahiirta Manchester United Oo Ole Gunnar Solskjaer Ka Dalbaday Hal Arrin Ka Hor Ciyaarta PSG
Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa codsi u diray tababarahooda ka hor kulanka toddobaadkan ay kula ballansan yihiin PSG.
Jamaahiirta ayaa ka hor intii aanay dhamaanin ciyaartii ay 3-2 kaga adkaadeen Southampton ee ka dhacday garoonka Old Trafford, waxay tababare Ole Gunnar Solskjaer ka codsadeen inuu hal isbeddel ku sameeyo safka uu kala hor tegi doono PSG, isla markaana uu tijaabiyo laacib aanu weli kalsooni buuxda siinin.
Manchester United oo ay ka dhaawacan yihiin Nemanja Matic, Juan Mata iyo Ander Herrera ayaan la hubin inay taam u noqon doonaan kulankan, hase yeeshee, waxay taageereyaashu ogyihiin in kulankii hore ee ay ku martigeliyeen PSG lagaga adkaaday 2-0.
United oo u baahan in ugu yaraan 2-0 ay la timaaddo inta aanay dhamaanin 90-ka daqiiqadood ee ciyaartu, ayaa waxay taageereyaashu ka dalbadeen tababarahooda inuu kulankaas ciyaarsiiyo laacibka reer Brazil ee Pereira.
Pereira oo gool qurux badan u dhaliyey Manchester United kulankii Southampton ayaa waxay jamaahiirtu dalbadeen in tababaruhu uu kusoo bilaabo.
Mid ka mid ah taageereyaasha ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray: “Romelu, Andreas iyo Dalot waxay u baahan yihiin in ciyaarta dambe lagu bilaabo. Waxay caddaynayaan inaanu haysano ciyaaryahanno si toos ah shaqadooda u qabsan karaya marka aad u baahan tahay oo na caawin karaya xilliyada dhaawacyada. Dalot iyo Pereira maan filaynin inay sidan u ciyaaraan, laakiin Lukaku ayaa toddobaadkan wax fiican qabtay.”
Taageere kale ayaa isaguna soo qoray: “Pereira wuxuu kasbaday in lagu bilaabo PSG, Lukaku waa inuu isaguna gool dhaliyo.”
Tababaraha Manchester United, Solskjaer ayaa isaguna ciyaarta kaddib amaan ballaadhan u jeediyey xiddiga reer Brazil ee Pereia.